यी राशिका पुरुषले जस्तोसुकै युवतीलाई पनि आफूतिर पार्न सक्छन् आकर्षित ..::Leading Nepal News
यी राशिका पुरुषले जस्तोसुकै युवतीलाई पनि आफूतिर पार्न सक्छन् आकर्षित ..
एजेन्सी । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरु छन् जुन राशिका पुरुषहरु अन्य राशिको तुलनामा निकै नै आकर्षित हुन्छन् । यी राशिका पुरुषहरूले आकर्षणको दृष्टिकोणले बाँकी राशिको सुन्दर भन्दा सुन्दर पुरुषलाई पनि पछाडी पार्दछन् । यी तीन राशिको पुरुषप्रति बढीजसो महिलाहरू प्रेम मात्र दिन तयार नभई उनीहरूलाई पाउनका लागि कुनै पनि हद पार गर्न तयार हुन्छन् । यी हुन् ती तीन राशिका पुरुषः
मिथुन राशिः मिथुन राशि हुने पुरुषहरूको व्यक्तित्व निकै बलियो हुन्छ, जसको कारण उनीहरूले सजिलै महिलाहरूलाई आकर्षित गर्ने क्षमता राख्दछन् । यस राशिको पुरुषको विषयमा यो पनि देखिएको छ कि यिनीहरूको केवल एक इशाराले महिलाहरू घायल हुन्छन् । यी पुरुषहरू अरू भन्दा महिलाहरूको विश्वास जित्न माहिर हुन्छन् ।सिंह राशिः वस्तुशास्त्रमा देखिएको छ कि सिंह राशिको पुरुष अन्य पुरुषको तुलनामा बढी रोमान्टिक हुन्छन् । यिनीहरू देख्नमा निकै असल र भद्र हुन्छन्, जो क सैसँग पनि बढी बोल्न रुचाउँदैनन् र यिनीहरूको यहि स्वभावले महिलाहरूलाई प्रेममा पागल बनाउँछ ।
तुला राशिः तुला राशि हुने पुरुषहरूको यदि व्यवहारको कुरा गर्दा अरू दोस्रो राशिको पुरुषको तुलनामा निकै रहस्यमय देखिन्छ । यस राशिका पुरुषहरूले बढी कोशिश नगर्दा पनि महिलाहरू यिनीहरू प्रति आकर्षित हुन्छन् । यति मात्र नभई महिलाहरू यी पुरुषसँग मित्रता बढाउन निकै उत्साहित हुन्छन् ।
बुधबार जन्मिएका मानिस हुन्छन् साह्रै भाग्यमानी यस्तो हुन्छ स्वभाव….
बिवाहको पहिलो रात भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती…पछुताउनुहोला !
जीवनमा सधैँ सफल हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति….
यसरी सिरानी राखेर कहिल्यै नसुत्नुहोस्….
सबैभन्दा धनी हुन्छन् यी राशीका व्यक्ति…
के तपाईं आफ्नो भाग्य चम्काउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस वास्तुशास्त्रका यी ८ उपाय..
यस्ता गुण भएका युवती हुन्छन् असाध्यै भाग्यमानी ..!
कुन महिलाको स्वभाव कस्तो ? अब जिभ्रोबाटै यसरी थाहापाउनुहोस…
आज साउन १५ ! यस्ता छन् खिर खानुका फाइदाहरु..